Imazi edla neenkunzi – Ntu News
Ntlandlolo ebenqongophele amaxesha okuba ubone umphathiswa omncinci ngokuzalwa, kurhulumente waseMpuma Koloni. Kodwa ngoku zindaba zayizolo ezo kuba abantu abatsha bakhokhele ngoku kurhulumente wephondo leMpuma Koloni.
Omnye wabantu abatsha abakhokhelayo kwiphondo leMpuma Koloni nguSiphokazi Mani-Lusithi nonguMphathiswa weSebe lezeNtlalontle . Nangona emncinci nje ngokuzalwa kodwa kwicala lezokukhokhela ungumakad’enetha engenadyasi. Xeshikweni engumfundi wazimanya nezopolitiko nalapho waye wakhokhela kwimibutho yabantu abatsha ekwiphiko leANC.
Umphathiswa uSiphokazi Mani- Lusithi wazalelwa kwidolophana encinci ekuthiwa yiStenysburg kwalapha eMpuma Koloni waze wakhulela eBhayi ekhuliswa ngumama wakhe. Ezopolitiko wazincanca ebeleni esemncinci. Umama wakhe yayingumntu oyilandelayo imicimbi yezopolitiko. Kwakusithi xa kukho intlanganiso yeSouth African Communist Party (SACP) kunye neAfrican National Congress (ANC) uMani- Lusithi wayehamba nomama wakhe eyentlanganisweni. Kwathi kanti kupheka inkokheli yangomso.
Ngo2019 apha eMzantsi Afrika kwakubanjwe ulonyulo loorhulumente basemakhaya waze uMani- Lusithi wachongwa njengoMphathiswa weSebe lezeNtlalontle.
Uxelele iNtu News Media ukuba umama wakhe nguye owamenza walandela ezomzabalazo.
“Kwaye nemeko yasekuhlaleni yenye yezinto eyandenza ndaqonda ukuba mandilandele ezomzabalazo,” utsho uMani- Lusithi.
Uyebeke elubala ukuba asiyondlwan’iyanetha ukukhokhela iSebe lezeNtlalontle kuba linemiceli mingeni emininzi kakhulu.
“Oko ndaqalisa umsebenzi njengomphathiswa kwelisebe ndigaxeleka kwimeko ezininzi nalapho kufumanekisa ukuba kukho amadoda axhaphaza abantu ababhinqileyo ngezesondo, abantwana abaphathwa gadalala kwakunye nabantu abadala ingakumbi oomama abatyholwa ngokuthakatha. Zimeko eziye zindiphathe kabuhlungu kakhulu emphefumlweni. Kodwa kuba ndinabantu endisebenza nabo, inkxaso nokukhuthazana yinto yemihla ngemihla,” utsho umphathiswa.
Nangona ehlala esendleleni ngenxa yomsebenzi wakhe kodwa xa ekhona engenzinto uyaqinisekisa ukuba uchitha ixesha nomyeni wakhe kwakunye nabantwana bakhe.
“Xa ndihleli ndingenzinto ndingumntu othanda ukufunda incwadi kwaye ndiyakuthanda ukubukela ibhola ekhatywayo,” ulebele ngelitshoyo umphathiswa.
← ABAHLOBO FOOTBALL CLUB WINS XASONIC FOOTBALL TOURNAMENT 2021
Massive boost as school and club rugby resumes! →